မိန်းကလေးတစ်ယောက် ပွစိပွစိလုပ်နေသေးရင် တန်ဖိုးထားပါ – Shinyoon
မိန်းကလေးတစ်ယောက် ပွစိပွစိလုပ်နေသေးရင် တန်ဖိုးထားပါ မိန်းကလေးတစ်ယောက်က မလိုအပ်ပဲနဲ့ စကားတွေ အများကြီးမပြောတတ်ဘူး အရေးမပါပဲနဲ့လဲ လေကုန်မခံတတ်ဘူး
ဟိုလို မလုပ်နဲ့ ဒီလိုမလုပ်တားနေသေးတယ်ဆိုတာ စိတ်ပူနေသေးလို့ လို့သာ မှတ်ပါ ပြီးတော့ သဝန်တိုတတ်တယ်ဆိုတာ မိန်းကလေးတိုင်းရဲ့ သဘာဝပါ ဒါစိတ်ပျက်စရာမှ မဟုတ်တာ သဝန်တိုတယ်ဆိုတာ ဆုံးရှုံးရမှာကြောက်တဲ့စိတ် ခေါင်းစဉ်တွေ တပ်ချင်သလိုတပ်ပြီး နာမည်ဆိုးတွေ ထပ်ထပ်မပေးပါနဲ့
ကိုယ့်ချစ်သူကို ကိုယ်တစ်ယောက်တည်း ပိုင်ချင်တဲ့ အတ္တတော့ ချစ်တတ်တဲ့ လူတိုင်းမှာ ရှိတတ်ပါတယ် တကယ်မချစ်ပဲနဲ့ ဘယ်သူက ဆုံးရှုံးရမှာ ကြောက်နေမှာလဲ မိန်းကလေးတစ်ယောက် သဝန်တိုမှာ စိတ်ကောက်မှာ မကြောက်နဲ့ ပြီးတော့ ပွစိပွစိ လုပ်နေသေးရင် ဗြစ်တောက်ဗြစ်တောက် ပြောနေသေးရင် တန်ဖိုးထားပေးပါ
မိန်းကလေးတစ်ယောက် သာမန်ထက်ပိုပြီး တိတ်ဆိတ်သွားတဲ့အခါ သာမန်ထက်ပိုပြီး အေးစက်သွားတတ်တယ် ဘာပဲလုပ်လုပ် စိတ်မဝင်စားတော့ဘူး ကောင်းသည်ဖြစ်စေ မကောင်းဖြစ်စေ ဘာမှ ဝင်မပြောတော့ဘူး အဲ့လိုမျိုး အခြေအနေတွေဖြစ်လာတဲ့အခါ သူ့စိတ်ထဲမှာ မရှိတော့ဘူးဆိုတာ သတိရပါ
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် စိတ်မဝင်စားတော့ဘူး ပြင်လာမှာ မဟုတ်တဲ့လူတစ်ယောက်အတွက်လဲ လေကုန်ခံပြီး မပြောတော့ဘူး ဒါ စိတ်ပျက်ခြင်းရဲ့ အစပါ နောက်ဆုံး . . . အဆုံးသတ်အနေနဲ့သူ့ဘဝထဲမှာ မင်းကို မလိုအပ်ပဲ နေတတ်သွားလိမ့်မယ် ။
မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ ပြစိပြစိလုပ္ေနေသးရင္ တန္ဖိုးထားပါ မိန္းကေလးတစ္ေယာက္က မလိုအပ္ပဲနဲ႔ စကားေတြ အမ်ားႀကီးမေျပာတတ္ဘူး အေရးမပါပဲနဲ႔လဲ ေလကုန္မခံတတ္ဘူး
ဟိုလို မလုပ္နဲ႔ ဒီလိုမလုပ္တားေနေသးတယ္ဆိုတာ စိတ္ပူေနေသးလို႔ လို႔သာ မွတ္ပါ ၿပီးေတာ့ သ၀န္တိုတတ္တယ္ဆိုတာ မိန္းကေလးတိုင္းရဲ႕ သဘာ၀ပါ ဒါစိတ္ပ်က္စရာမွ မဟုတ္တာ သ၀န္တိုတယ္ဆိုတာ ဆုံးရႈံးရမွာေၾကာက္တဲ့စိတ္ ေခါင္းစဥ္ေတြ တပ္ခ်င္သလိုတပ္ၿပီး နာမည္ဆိုးေတြ ထပ္ထပ္မေပးပါနဲ႔
ကိုယ့္ခ်စ္သူကို ကိုယ္တစ္ေယာက္တည္း ပိုင္ခ်င္တဲ့ အတၱေတာ့ ခ်စ္တတ္တဲ့ လူတိုင္းမွာ ရွိတတ္ပါတယ္ တကယ္မခ်စ္ပဲနဲ႔ ဘယ္သူက ဆုံးရႈံးရမွာ ေၾကာက္ေနမွာလဲ မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ သ၀န္တိုမွာ စိတ္ေကာက္မွာ မေၾကာက္နဲ႔ ၿပီးေတာ့ ပြစိပြစိ လုပ္ေနေသးရင္ ျဗစ္ေတာက္ျဗစ္ေတာက္ ေျပာေနေသးရင္ တန္ဖိုးထားေပးပါ
မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ သာမန္ထက္ပိုၿပီး တိတ္ဆိတ္သြားတဲ့အခါ သာမန္ထက္ပိုၿပီး ေအးစက္သြားတတ္တယ္ ဘာပဲလုပ္လုပ္ စိတ္မ၀င္စားေတာ့ဘူး ေကာင္းသည္ျဖစ္ေစ မေကာင္းျဖစ္ေစ ဘာမွ ၀င္မေျပာေတာ့ဘူး အဲ့လိုမ်ိဳး အေျခအေနေတြျဖစ္လာတဲ့အခါ သူ႔စိတ္ထဲမွာ မရွိေတာ့ဘူးဆိုတာ သတိရပါ
ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ စိတ္မ၀င္စားေတာ့ဘူး ျပင္လာမွာ မဟုတ္တဲ့လူတစ္ေယာက္အတြက္လဲ ေလကုန္ခံၿပီး မေျပာေတာ့ဘူး ဒါ စိတ္ပ်က္ျခင္းရဲ႕ အစပါ ေနာက္ဆုံး . . . အဆုံးသတ္အေနနဲ႔သူ႔ဘ၀ထဲမွာ မင္းကို မလိုအပ္ပဲ ေနတတ္သြားလိမ့္မယ္ ။
ဝဋ် တစ်လုံးတည်းပါပဲ ကိုယ့်အလှည့်ရောက်တဲ့အခါ ကိုယ်လုပ်ခဲ့တာထက် နှစ်ဆ ပိုပြီး ခံရတတ်တယ်